कार्यक्रम, प्रमुख अतिथि र पीडा
बासु श्रेष्ठ, (उडव्रिज, भर्जिनीया)
कार्यक्रम चल्ने लहर छ । विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु हुन्छन् । राजनैतिक, साहित्यिक, उद्घाटन, शिलान्यास आदि आदि । भनौँ जुनसुकै विषय र क्षेत्रको कार्यक्रम हुनसक्छ । र यस्ता कार्यक्रम जहाँतहिँ भईरहेको हुन्छ । स्वाभाविक हो कार्यक्रम हुनु । अनि त्यस्ता कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा स्थापित तथा प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरुलाई निम्त्याईन्छ ।
यस लेखमा विशेष गरी साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने प्रमुख अतिथिको अव्यक्त पीडाको बारेमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरेको छु ।
देश र विदेशमा साहित्यिक कार्यक्रम मनग्गे हुन थालेका छन् । विमोचन, सम्मान देखि अभिनन्दन लगायत थुप्रै साहित्यिक कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रकारका जयन्ती कार्यक्रमहरु हुने गर्दछन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने आयोजकहरुको प्रशँसा गर्नै पर्दछ । आयोजकहरुले गर्ने पैसाको खर्च, कार्यक्रम बनाउन र सफल बनाउन गरिने प्रचार प्रसार, निम्ताहरु बाँड्ने लगायतकालागी गरिने मेहनतकोलागी उसको योगदानको कदर गर्नैपर्छ । आफ्नो कार्यक्रमको शोभा बढाउन र बहुसँख्यक मानिसको सहभागिता होस्, कार्यक्रमको प्रचार प्रसार तथा समाचार चारैतिर फैलियोस् भन्ने लालसा आयोजकमा हुनुपनि स्वाभाविक नै हो । त्यसकोलागी नै हो उसले कार्यक्रमको विषयगत क्षेत्रमा प्रसिद्धि या ख्याति कमाएका व्यक्तिहरुलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाएका हुन्छन् । यहाँसम्म ठिकै छ । त्यस्ता व्यक्तिको सम्मानपनि हुने, आफ्नो कार्यक्रमले प्रचार प्रसारपनि पाउने । एक तिरले दुई शिकार ।
तर यस्तो आयोजनामा आयोजकहरुले ध्यान नपुर्याएका र मलाई खट्कि रहेका विषय चाहिँ के हो भने निम्त्याइएको त्यस्तो व्यक्तिको स्वास्थ्य तथा खानपिनमा ध्यान नपुर्याईनु ।
स्वाभाविक रुपले आमन्त्रित त्यस्ता व्यक्तिहरु उमेरमा पाको भईसकेका हुन्छन् । उनिहरुलाई मँचमा घण्टौँसम्म एउटा मेचमा आसिन गराएर लम्बेतान भाषणादिका बिच कैदि झैँ बनाएर राखेको हुन्छ । अक्सर साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा मैले देखेको आयोजकका यस्ता केहि कमजोरीहरु यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
एक) काठमाण्डौँको एक साहित्यिक कार्यक्रममा वरिष्ठ आख्यानकार मदनमणी दिक्षित प्रमुख अतिथिको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रमकोलागी ठिक समयमा आईपुग्नुभएपनि कार्यक्रम ढिलो शुरु भएको थियो । उमेरले साह्रै गल्नुभएको प्रष्टै देखिने व्यक्तित्वलाई आयोजकले दुख दिएको अनुभव मैले गरेँ । त्यसो भनेर मैले आयोजकप्रति कुनै दुर्भाव व्यक्तपनि गरेको होईन । तर कार्यक्रमपछि जब मैले वहाँसँग परिचय गरेर केहि कुरा गर्न खोज्दा वहाँ निरापद र थाकेको अनुभव मैले गरेँ । मैले आफ्नो परिचय दिँदा वहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया पाईनँ । मैले वहाँको शारीरिक अवस्थाप्रति कुनै अवमूल्यन गर्नपनि खोजेको होईन । किनभने वहाँको उमेर अनुसार कार्यक्रम भर मँचमा बस्नुपर्दा थाकिसक्नु भएको थियो । वहाँसँग फोटो खिच्ने लालसाले स्वाभाविकवश थुप्रै मानिसहरु अघिपछि र तानातान गरिरहेका थिए । मलाईपनि वहाँसँग उभिएर एउटा सम्झनारुपी फोटो खिच्ने रहर नजागेको होईन । तर वहाँको स्थिति र मानिसहरुको व्यवहार देखेर ममा वहाँप्रति सम्मान र माया अनि आयोजक र मानिसहरुप्रति उदेकको भावना जाग्यो र फोटो खिच्ने लालसा त्यागीदिएँ । मलाई मनमनै लाग्यो किन आयोजकहरुले यस्तो व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो कार्यक्रमको शोभा बढाउनकोलागी दुख दिन्छन् होला भन्ने लाग्यो । तर कसैलाई केहि भन्न सक्ने अवस्थामा म त्यहाँ थिईन ।
दुई) केहि वर्षपहिले अमेरिकामा भएको एक साहित्यिक कार्यक्रममा डा. ताना शर्मालाई मँचमा राखिएको थियो । डायविटिजको रोगी शर्मालाई बेलाबेलामा खाईरहनु पथ्र्याे । विना अर्थको लम्बेतान भाषण र कार्यक्रमले वहाँ आफ्नो मेचमा थच्चिनु परेको थियो । धन्न वहाँकि धर्मपत्नीले समयको ख्याल गरेर मँचमा खानुपर्ने सामाग्रीहरु बेला बेला लगेर दिनुहुन्थ्यो । तर आयोजकले कार्यक्रमलाई पाँच दश मिनेट रोकेर फुर्सत दिन जानेन, चाहेन । कार्यक्रम ढिलो शुरु भएको बहानामा विश्राम नलिई समाप्त गरियो । तर रोगी शर्माले आफ्नो शरीरकोलागी सुहाएपनि नसुहाएपनि मँचासिन हुँदाहुँदैपनि केहि खाँदै गर्नुपरेको थियो । त्योपनि श्रीमतिको कर र सहयोगले । आयोजकले यसप्रति अलि ध्यान पुर्याएर कार्यक्रम सँचालन गरेको भए कति राम्रो र व्यवहारिक हुने थियो भन्ने मलाई लागी रह्यो र आजसम्म लागीरहेको छ ।
तीन) हालैको कुरा हो । समालोक शिरोमणी प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीको अमेरिकामा विभिन्न साहित्यिक सँस्थाहरुले आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा साहित्यिक कार्यक्रम । बाह्रबजे शुरु हुने भनिएको कार्यक्रम झण्डै दुई बजे शुरु भएको थियो । यो त हाम्रो नियति र परिचायक नै हो । लगभग दुईघण्टाको अभिनन्दन कार्यक्रमपछि केहि समय विश्राम लिएर दोश्रो चरणको कार्यक्रम गर्ने भन्ने म कार्यक्रम उद्घोषक र आयोजकका सँयोजक गोविन्द गिरी प्रेरणाको सल्लाह भएको थियो । तर प्रमुख आयोजकमध्येका एक आयोजकको जिद्धिले यो योजना तुहियो । प्रमुख अतिथिको रुपमा रहनुभएका त्रिपाठीपनि डायविटिजको शिकार हुनुहुन्छ । वहाँको त्यस रोगको बारेमा आयोजकले पटक्कै बेवास्ता गरेर आफ्नै कार्यक्रमप्रतिमात्र ध्यान दिएको देखियो । अन्ततः मैले पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको घोषणासँगै माईक दोश्रो चरणका सँचालकलाई जिम्मा दिएँ । तर डा. त्रिपाठीको मँचासिन निरन्तर नै रह्यो । यसरी दुईबजे मँचासिन हुनुभएका त्रिपाठी झण्डै ६.३० बजेसम्म एउटै मेचमा बस्नुपरेको थियो । पानीको बोतल उपलब्ध गरार्ईएको भएपनि डा. त्रिपाठीको स्वास्थ्यप्रति र वहाँको खानपिनको बारेमा ध्यान दिईएको देखिएन । यसले आयोजक आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्ने गर्दछ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
यसरी कार्यक्रममा मँचासिन हुने प्रमुख अतिथि बाहेक अन्य पाहुनाहरुपनि हुन्छन । र प्रमुख अतिथिमा भएका समस्या अन्य मँचासिन पाहुनाहरुमापनि हुनसक्छ । यस बारेमा आयोजकहरुले ध्यान दिनुपर्ने अति आवश्यक देखेको छु ।
अर्काे उपाय कार्यक्रम ठिक समयमा शुरु गर्ने, डेढघण्टा वा बढिमा दुईघण्टामा समाप्त गर्ने गरियो भने आयोजकको कुशलता प्रदर्शन हुनाका साथै सबैको समय बचत र व्यवहारिक हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।